Garoowe: Shirka Jihaynta Siyaasadda Xukuumadda Puntland oo lasoo gaba-gabeynayo. – Idil News
Garoowe: Shirka Jihaynta Siyaasadda Xukuumadda Puntland oo lasoo gaba-gabeynayo.
GAROOWE (IDIL NEWS)-Waxaa lagu wadaa maanta in Magaalada Garoowe ee Caasimadda Dowladda Puntland lagu soo gaba-gabeeyo shirka Jihaynta Siyaasadda Xukuumadda Puntland, kaas oo uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday Garoowe.
Shirkan oo inta uu socdo si weyn loogu lafa-gurayay Jiheynta Siyaasadda Xukuumadda cusub ee Puntland, ayaa waxaa daah-furay Maalinimadii Talaadada Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Siciid C/llaahi Deni, isagoona furay Golaha Wasiirda cusub inay isla gaaraan Mowqifyo cad cad oo guulo u horseeda Shacabka Puntland.
Shirka oo qorshihiisu ahaa Saddex Maalmood, kana socday Xarunta Wasaaradda Qorsheynta ee Dowladda Puntland, ayaa la filayaa in Gaba-gabadiisa maanta laga soo saaro War-murtiyeed ku saabsan Waxyaabaha kasoo baxay iyo Siyaasadaha Dowladda ee ay soo bandhigeen Wasaaraduhu.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Siciid C/llaahi Deni, ayaa la filayaa in uu ka jeediyo gaba-gabada Shirka Khudbad dar-daaran ah oo ku aadan fulinta Qorshayaasha Wasaaradaha ee la isla qaatay iyo in loo adeego shacabka Puntland oo haatan wajahaya xaalado isugu jira Colaad iyo abaaro.